Xildhibaan Ilyaas Cali Xasan » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Ilyaas Cali Xasan » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Ilyaas Cali Xasan
Xildhibaan Golaha Shacabka waxa uu ku dhashay degmada Buur-hakaba ee gobolka Bay, sanaddii 1983-dii. Waxaa laga soo doortaa maamulka Koonfur-Galbeed, waana markii ugu horreysay ee uu noqdo xildhibaan. Waa Sentor ku cusub siyaasadda, balse horay ula soo shaqeeyay hay’ado kala duwan oo caalami ah. Hadda waa guddoomiyaha Guddiga Qeyraadka Qaranka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Golaha Aqalka Sare. home
Ilyaas Cali oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu ku dhashay degmada Buur-hakaba ee gobolka Bay, sanaddii 1983-dii.
Markii uu xildhibaan noqonnayay ayuu ka yimid dibadda oo ay weli ku nool yihiin xaaskiisa iyo carruurtiisa.
Waxbarashadiisii hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay dugsiga Waaberi ee Buur-hakaba. Halka sarena uu ku qaatay Usama Bin Zayd oo Muqdisho ku yaallay, gaar ahaan degmada Hodan.
Ilyaas aqoontiisu waxa ay gaarsiisan tahay Master Digree. Jaamacadda Muqdisho ayuu 2006 ka baxay gaar ahaan kulliyadda maareynta ganacsiga, halka Master-ka uu ku sa meeyay Germany jaamacadda FAU. Waxa uu bartay International Law, takhasuskiisa gaarka ahna waa Xuquuqda Aadanaha (Human rights).
Ilyaas iyo siyaasadda
Waa Sentor ku cusub siyaasadda, balse horay ula soo shaqeeyay hay’ado kala duwan oo caalami ah. Waxaa laga soo doortay degmada Buur-hakaba ee gobolka Bay oo hoostagta maamulka Koonfur-galbeed.
Xildhibaanka oo lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa sababta ugu weyn ee ku kalliftay in uu siyaasadda soo galo ay tahay inuu dareemay mas’uuliyad ka saaran dalka guud ahaan. Waxa ugu weyn ee uu hiigsanayo waa in Soomaaliya laga dhaqangeliyo labo arrin oo uu u arko in ay muhiim u tahay ummadda, kuwaas oo kala ah nabad iyo caddaalad.
Sanatar-ka oo ku sugan Shirka Soomaaliya ee Baraasalis
Inkastoo aan sababo amni-xumo loo tagi karin deegaanka uu matalo, haddana Ilyaas iyo dadka uu matalo waxaa ka dhaxeeya kala warqaadasho joogto ah. Waxay isku arkaan Muqdisho, Baydhabo, iyo mararka qaar dibadda. Xisbi siyaasadeed xubin kama aha, wuxuuse qorshynayaa inuu dhowaan biiro.
Intii uu hay’adaha caalamiga ah la shaqeynayay wuxuu caawiyay Soomaali badan oo ku sugneyd dalka Giriigga, qaarkoodna wuxuu ka sii daayay xabsiyada.